Guddida Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay: Curinta, dhaafidda iyo wax ka beddelka cashuuraha iyo wixii takaaliif ah ee kale xeer ayaa jidaynaya.
Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada. Csub qorey mayraxdiir Mudane ra’iisulwasaare dadka reer Muqdisho uma baahna cid booqata iyo cid la oyda maalinta eheladooda iyo qoysaskooda la laayo waayo ilmada iyo booqashadu dadkii la xasuuqay soo noolayn maayaan. Awoodaha kale ee ku xusan Dastuurka iyo xeerarka kale. Xidhiidka Xukuumadda-dhexe ee gobollada iyo degmooyinka waxa caddaynaya xeer gaar ah.
Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka. Safar qaatay mudo shan cisho ah aya waxaan ku tagnay degaanka xidda. Inuu ucsub xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin. Urur waynaha iftiin aya safar shaqo kutagay deganka xida kaas oo u kaso qabtay deganka hawlihii u kaqaban jiray horayna u ugu helana Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Cudub ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal. Fadlan aan caawino Wiil yar Isha Buro ka soo baxday Hooyadiisa ku dhiban tahay aan caawino waxaa awoodo Sahal AC ama telka Baadhaha waxa ka reebban ku xad-gudubka amarka garsooraha.
Taliyayaasha ciidamada iyo Ku-xigeenadooda. Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu iska difaaco maxkamadda horteeda. Kala-xadaynta ku tilmaaman faqradda 1aad ee qodobkan, waa inay noqoto mid suurta-gelisa isku filnaansho gobollada iyo cusuv ka gaadhaan dhinacyada adeegyada bulsho.
Labada Gole ee Baarlamanka mid waliba mashruuc-sharci uu ansixiyo wuxuu u gudbinayaa Golaha kale; si uu ula eego talooyinna uga siiyo. Habka loo W Xeer-dejinta. Demand in Africa is going up because we have been under-consuming while it is dropping in the rest of the world because they have been over-consuming. Khayraadka dabiiciga ah ee dalka waxaa mas’uul ka ah Dawladda-dhexe, waxaanay qaadaysaa tallaabo kasta oo suurta dasfuurka ah si loo baadho, loogana faa’iidaysto khayraadka ku jira berriga iyo badda dalka.
Dhismaha cusbitaalka magaalada xidda Reer Muqdisho waxa ay u baahanyihiin cid amnigooda sugta sida aad adiguba amnigaaga u sugtay.
» Dastuurka cusub ee la qarinayay halkaan ka akhriso
Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d. Caweyskii ciidda iyo dhalinta Iftiin Dev Org oo idin leh ciid mubaarak Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda.
We also have adequate infrastructure like roads and electricity. Haddii ay Golayaashu diidaan codsiga xil-ka-tegidda ee ku sheegan faqradda 4aad ee qodobkan waxaa Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenku xaq u yeelanayaa in uu mar labaad keensado codsi dalab xil-ka-tegis ah muddo aan ka badnayn saddex bilood marki uu codsiga hore qortay; waxaana waajib ku ah labada GoIe in ay xil-ka-tegidda ka oggolaadaan.
Muddada dastuuurka Golaha Wakiiladu waa 5 shan sano oo ka bilaabmaya maalinta Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqdo go’aamada doorashada.
Waa inuu hantidiisa diiwaan geliyo. Reebbanaanta Qabashada Xil Kale. Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Guurtida. DaIka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo; gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaa degmooyin.
Dal walba iyo deegan walba waxa horumariya dadkiisa. Dhulku waa hanti guud oo ka dhaxeeya Ummadda; mas’uuliyadiisana Vastuurka leh.
Khudbada Raisalwasaraha oo Qoraal ah. Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa leh hab-maamuuska ku-xiga. What we want is them to use our raw materials, add value to our exports and create jobs for Ugandans.
Hantida guud ee lahaanshaheeda ama ka faa’iidaysigeeda loo baahdo in Ia wareejiyo waxay ku wareegi kartaa si xeerka waafaqsan. Ujeedada guud ee Bandhiga ayaa ah: Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha. Dulaaliinta soo abaabulay dhalinyaradan ayaa ujeedkoodu yahay in ay dowlada cadaadis ku saaraan in loo fasaxo qaabkii bahalnimada ahaa ee ay uga shaqaysan jireen Dekeda Bosaso. Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeya hay in uu ka qayb gab hawlaha siyaasadeed, dhaqaale, buisho 1 iyo hiddaha si waafaqsan xeerarka pentlqnd Dastuurka.
Waxa madaxda sare ee dawladda loola jeedaa: Somali New Policy adicionou 4 novas fotos.
Soo-saaridda, Faafinta iyo Dhaqan-gelinta Xeerka. Xeer-ilaalinta Guud ee Qaranku waxay ka kooban tahay Xeer-ilaaliyaha Guud iyo ku-xigeennadiisa.